Goorma ayuu Yahay Shirkaaga Xiga ee Soo Socda? | Martech Zone
Goorma ayuu Yahay Shirkaaga Xiga ee Soo Socda?
Isniin, April 26, 2010 Arbacada, Nofeembar 5, 2014 Douglas Karr
Qaar ka mid ah shirkadaha aan la shaqeynayo, gaar ahaan ganacsiga ganacsiga (B2B) waxay arkayaan natiijooyin aan caadi aheyn oo ay dib ugu soo laabanayaan maalgashiga iyadoo la adeegsanayo dhacdooyin farsamo iyo ganacsiyo ganacsi. Waxaan doonayay inaan wax ka qoro wax ku saabsan suuqgeynta dhacdooyinka dalwaddii in muddo ah, dhawaana waan la hadlay Cadaalad daro, dhacdada dalwaddii horseedka ah, isweydaarsiga dalwaddii iyo bixiyaha adeegga tooska ah ee tooska ah ee khadka tooska ah.
Cadaalad daro ayaa bixisa wadarta softiweer ahaan barnaamij adeeg, oo ay kujiraan softiweerka shirka, softiweerka websaydhka, sheekaysiga khadka tooska ah, ururinta hogaaminta iyo qalabka warbixinta Si ka duwan shir dhaqameed ay adag tahay in lala socdo kaqeybgalayaasha, shir halbeeg ah ayaa kuu ogolaanaya inaad wax walba la socoto! Marka lagu daro kharashka dhimista macdanta 'lead', shirkado badan ayaa qaadanaya shirar dalwad ah si ay mas'uul uga ahaadaan deegaanka sidoo kale.
Sahan horraantii sanadkan, Cadaalad daro ayaa heshay boqolkiiba 48 suuqleyda qorsheynaya inay kordhiyaan isticmaalkooda dhacdooyinka dalwaddii sanadka soo socda. Sababaha ugu caansan ee loo qaato dhacdooyinka farsamada ayaa ah kordhiyo gaadhista suuqgeynta (32 boqolkiiba) iyo kordhi mugga leedhka (15 boqolkiiba).
Warbaahinta Ganacsiga Mareykanka ayaa soo warisay in 75% go'aan qaadayaasha ganacsiga ee la daraaseeyay ay sheegeen inay kaqeybgaleen seddex ama in kabadan munaasabadaha ku saleysan Webka 12-kii bilood ee lasoo dhaafay. Suuqgeynta Sherpa waxay soo warisay in shirarka macmalka ah ay kordheen 37% kheyraad macluumaad inta lagu gudajiray qeybtii hore ee sanadka 2009. Miisaaniyadaha safarka oo aad loo adkeeyay, qarxinta shabakadaha bulshada iyo raadinta aaladaha cusub ee jiilka hogaaminta ayaa is biirsaday si loo kobciyo horumarkan degdega ah.
Ariba waa mid ka mid ah cadaalad darada sheekooyinka guusha. Ariba waa shirkad maareyn caalami ah oo ogaatay in dhaqaalaha uu saameyn ku yeelanayo dadka u safraya shirkooda soo socda. Iyagoo adeegsanaya barxadda Unisfair, waxay u guureen shirkoodii jidh ahaaneed khadka tooska ah waxayna si weyn uga faa'iideysteen, taasoo keentay in 2,900 isdiiwaan geliyayaal ah, 1,618 kaqeybgalayaal ah, 4,000 oo soo degsasho ah, 5,200 booqashooyin ah, 538 wada sheekeysi ah oo la bilaabay iyo 1,078 farriin! Taasi waa waxqabad fiican!
3 Tilmaamood oo ku Saabsan Suuqgeynta Dhacdada Virtual
Joerg Rathenberg, agaasimaha sare ee suuq geynta Unisfair, ayaa bixiyay talooyinka soo socda ee suuq geynta dhacdooyinka dalwaddii:
Dhacdada kahor: Ku billow inaad u diyaar garowdid goor hore, sida aad ugu diyaar garoobi lahayd shir jimicsi ama dhacdo. Hubso inaad haysato qorshe jiilka dhagaystayaasha codka leh. Noqo qof hal abuur leh iskuna day inaad khibrada u yeelato sida ugu macquulsan. Tusaale ahaan, u soo dir baakado dhacdo oo ay ku jiraan alaabada shirarka tusaale ahaan funaanado dadka isdiiwaan geliya haddii aad lacag ka qaadatid dhacdada. Bixi jillaabyo loogu talagalay isku-xirka bulshada ee u oggolaanaya diiwaangeliyayaashu inay la wadaagaan casuumaadda beelahooda. U hubso inaad ku darto waxyaabo xiiso leh kuwa ku hadla kuwaas oo soo jiidan kara dad badan. Waxyaabaha wanaagsan ayaa fure u ah guul guul dalwaddii! Hubi in diiwaangeliyayaashu leeyihiin waqtiga ay ku bilaabi doonaan jadwalkooda jadwalkooda.
Intii ay socotay munaasabadda: Ku qasci kal-fadhiyadaada qaybo yaryar - inta lagu guda jiro dhacdooyinka farsamada, dadku ma lahan taxaddar la mid ah ka-qaybgalayaasha jirka. Waxaan ogaanay in 20 daqiiqo ay tahay dhererka ugu fiican. Hubso in dadka ku hadla ay diyaar u yihiin wada sheekaysiga qolka isku xirka. Bixi fursado badan oo aad kula falgasho, ku xirnaato kuna xirto. Ka faa'iideyso doorashooyinka iyo isdhexgalka warbaahinta bulshada si loo abuuro buuq iyo in la qaato heerkulka dhacdadaada. Warbixinada waqtiga-dhabta ah ayaa kuu sheegi doona waxa socda. U adeegso farriimaha dadka si aad ugu kaxeyso halka ay wax ka socdaan. Sii dhiirrigelin ka-qaybgalayaasha ka qaybqaadashada, sida tartamada ama sawirrada.
Dhacdada Kadib: Dhacdooyinka ficilku waxay si dhakhso leh ugu kobcayaan had iyo jeer meheradaha ka qaybgalka dalwaddii. Dhammaan waxyaabahaaga, oo ay ku jiraan Q & A, waa in isla markiiba la heli karaa markii la dalbado isla marka ay dhammaato qaybta nool. Caadi ahaan qiyaastii 50% diiwaangeliyayaashu waxay si toos ah u muujiyaan nolol. Hubso inaad hesho 50% kale ee ka soo qayb gala sidoo kale - goor dambe. Ka faa'iideyso aaladaha ay ka midka yihiin Unisfair ee Ka-Qaybgalka Index si loogu qiimeeyo dhagaystayaashaada iyadoo lagu saleynayo tira-koobkooda, waxqabadyadooda iyo waxyaabaha ay xiiseeyaan isla markaana u siiya macluumaadkan kooxdaada dabagal. Dhacdooyinka ficil ahaaneed waxay leeyihiin faa'iido aad ku ogaan doontid wax kasta oo kaqeybgalayaashu sameeyeen intuu / isagu ku jiray deegaankaaga. Sii dhammaan macluumaadkan hodanka ah kooxdaada iibka si aad u hubiso inay sii wadi karaan wadahadalka.
Qaar ka mid ah ciyaartoyda kale ee suuqa ku jira ayaa ah InXpo, ON24, Muuqaalka2, Goobta Labaad iyo 6Connex. Diyaar uma ihi inaan ka tanaasulo dhacdooyinka jireed weli - Waxaan ka helay qiimo aad u badan isku xirnaanta ka qaybgalayaasha kale. Maaddaama kharashka shirku ka bilaaban karo $ 50k, in kastoo, shir isweydaarsi waa lama huraan. Waxaad soo jiidan doontaa dad aad u tiro badan oo rajo weyn leh laakiin ka fogaanaya kharashka ama dhib ku ah safarka.
Tags: Qorshaynta Dhacdadadhacdooyinkashirarka internetkacadaalad daro
Immisa ayaad Bixineysaa Falanqaynta Bilaashka ah?
WordPress la jabsaday? Toban Talaabo oo Lagu Dayactiro Blog-kaaga